HCG nemisebenzi yabo
Kuthiwa ama-hormone kukhona izinto raznostrukturnyh organic uyakwazi ezithinta ukusebenza umzimba womuntu. hormone Gonadotropic ezithinta umsebenzi kwesimiso sokuzala. Basuke kwemiqondo kule anterior pituitary indlala futhi ukusuka lapho kuthiwa akhishelwa egazini.
Ama-hormone we pituitary anterior
Indlala pituitary ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili: front futhi bakhulise. Ngqo hormone phambi kwemiqondo futhi akhishelwa egazini. I Lobe posterior we indlala pituitary zivela hypothalamus futhi akhishelwa egazini kuphela ngaphansi kwezimo ezithile.
Gonadotropic hormone pituitary sikhuthaze nezindlala ngokobulili. Lezi zihlanganisa:
FSH - hormone okuthiwa i follicle-inkanuko. Ukhuthaza oogenesis futhi spermatogenesis. Ingabe iprotheni eziyinkimbinkimbi (glycoprotein) okuyinto sakhiwa ama-amino acid ohlanganiswe carbohydrate.
LH - luteinizing hormone. Ukhuthaza ukukhululwa kwe-neqanda elivela esibelethweni kuthinta uketshezi hormone ocansini (i-estrogen, progesterone) e amadoda kubangela uketshezi of androgens. Inani le-hormone kuyahlukahluka ngesikhathi esisodwa umjikelezo wokuya esikhathini, kukhona uketshezi ezilinganiselwe futhi zokuvumelanisa of ethile FSH futhi LH.
ukukhiqizwa kwama-hormone wenziwa gonadotropah (amaseli basophilic) adenohypophysis. Akha-15% azo zonke emangqamuzaneni Lobe anterior.
Ukukhulelwa ne-hormone okuthiwa - hCG
Uma ukuvundisa yenzeka we esibelethweni ogangeni lesizalo e emzimbeni womuntu wesifazane uqala ukukhiqiza ama-hormone pituitary gonadotropic ethize ethulwa chorionic gonadotropin.
Umsebenzi hormone ukuze silondoloze luteum Corpus yomsebenzi (Ukukhetha estrogen futhi progesterone) ukuze nokuvuthwa egcwele placenta. Linikeza okusezingeni eliphezulu luteinizing nomthelela emzimbeni, okuyinto kakhulu lidlula FSH futhi LH.
izici Bezakhiwe hormone
Umsebenzi begazi amahomoni inikezela ngesakhiwo esiyingqayizivele ehlanganisa subunits ezimbili. Okokuqala, i--subunit, has isakhiwo kucishe zonke gonadotropins, kuyilapho b-subunit ihlinzeka ukuchayeka eliyingqayizivele kule hormone.
Ngamunye, lezi subunits ingasheshi noma iliphi ithonya ku-umzimba, kodwa lapho uxhumeke, uma umsebenzi wabo yemvelo kanye nethonya ku izinqubo esibalulekile i umzimba, ikakhulu kwesimiso sokuzala. Ngakho, ama-hormone gonadotropic njengomkhaya kunomthelela obalulekile hhayi kuphela emkhakheni ngokocansi, kodwa futhi izinqubo endocrine kanye nemithetho ibhalansi hormone.
Njengoba ama-hormone kanjani umzimba
Selokhu ezikhathini zasendulo, ososayensi abaye bazama ukufunda umsebenzi begazi amahomoni nethonya lazo umzimba womuntu. Gonadotropic hormone abe nethonya elikhulu izinqubo of the umzimba womuntu. Ngakho-ke, ukutadisha indlela izenzo zaso umbuzo obaluleke kakhulu futhi ezithakazelisayo. Ngo ucwaningo nge-hormone i-esinelebuli kwatholakala ukuthi amangqamuzana bayakwazi ukuqaphela kwama-hormone athile futhi ubopha kuphela kumaseli ethize.
Inqubo sesibopho ukuthobisa iseli wenziwa kokuba ulwelwesi noma amaseli ngaphakathi engqamuzaneni amaprotheni - yokwamukela. reception Intracellular iphathelene hormone steroid, njengoba bavame ukungena amaseli kanye nethonya umsebenzi wakhe. Ulwelwesi reception nobuntu hormone iprotheni abophele enamathela cell ulwelwesi.
Ubopha amaprotheni-hormone okuthiwa i yokwamukela Akhuthaza ukwakheka kwe-complex. Lesi sigaba senzeka ngaphandle ukubandakanywa enzyme, futhi emuva. hormone steroid faka cell, bophezela yokwamukela. Ngemva ukuguqulwa kwakhiwa eziyinkimbinkimbi ungena kuyi-nucleus yengqamuzana futhi Akhuthaza ukwakheka kwe-RNA specific cytoplasm lapho zamagama enzymatic izinhlayiya okubangela umphumela hormone esitokisini.
hormone Gonadotropic: imisebenzi nemiphumela kwi zokuzala uhlelo izinqubo
umsebenzi FSH ifinyelela eliphakeme azalela. Kuvuselela ukukhula kwamaseli follicular ukuthi kukhona ngaphansi kwethonya GSIK jikisa Bubbles futhi uvuthwe ngaphambi ukukhiqizwa kwamaqanda esiteji.
Ngaphansi kwethonya ukwanda nenqwaba SFS amaqanda futhi testes. Nokho, ngisho lapho umuntu eba yokufakelwa zokwenziwa i-hormone akunakwenzeka kubangele ukuthuthukiswa ijwabu interstitial, othinta uketshezi of androgens bemvelo wamasende.
GSIK obhekene ukukhiqizwa kwamaqanda futhi kumiswa wesibeletho Corpus luteum. Futhi ngokuhlanganyela follicle eqabulayo i-hormone kuthinta uketshezi estrogen. Ngaphansi kwethonya hormone ezizokhuthaza amaseli interstitial, kukhona ukukhula kwezitho obhekene yesibili ubulili izici.
Umthelela begazi LTG
LTG kuyafana ozokusebenzisa. Ngemva ukuhlolwa laboratory wembula ukuthi asesikhundleni engqamuzaneni efanayo, ngakho lowo muntu ngeke kukhethwe ngamunye, ngamunye la ma-hormone. I LTG misebenzi ifaka ubisi uketshezi futhi progesterone. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi lezi zinqubo zibangelwa ukuxhumana inombolo enkulu yama-hormone, kusukela ukuchayeka yomzimba LTG kuphela lezi zici ayiveli.
Ngakho, ukwabiwa ubisi kudinga amahomoni ezilandelayo:
FSH futhi GSIK - kubangele uketshezi estrogen ezikhiqiza amaqanda;
ngaphansi kwethonya hormone ukukhula futhi estrogen kuyinto ukukhula imigudu yobisi;
LTG kubangela uketshezi of progesterone ku luteum Corpus;
Progesterone kuvusa ukuthuthukiswa egcwele indlala mammary ezingeni alveolar-Lobed.
hormone Gonadotropic kudinga ukuxhumana njalo ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi ngokugcwele emzimbeni futhi zonke izinhlelo zalo. Yingakho nethonya ehlukile ngamunye wabo (endabeni nokuphathwa zokwenziwa hormone) akakubangeli ukusabela kulindeleke.
I ukukhishwa ngxenye gonadotropin likhiphele igazi-hormone. It has a isakhiwo polypeptide futhi kuthinte uketshezi hormone pituitary. Ngokwezinga elikhulu kuthinta i-hormone luteinizing, futhi follicle ke. GnRH ikhiqizwa endaweni ecacile zinkathi, abesifazane, isukela imizuzu engu-15 kuya ku-45 (kuye ngokuthi umjikelezo), futhi amadoda hormone ethakwa by njalo ngemva kwemizuzu engu-90.
Ngo yokufakelwa i-hormone zokwenziwa kuphethwe a weThrojani i- umsebenzi uketshezi hormone, okuyinto njengoba short ekuthuthukiseni uketshezi, bese - ku ukumisa okuphelele ukukhiqizwa gonadotropins yi pituitary anterior.
GnRH ukuchayeka inqubo ku umzimba
GnRH ukushukuma inikeza pituitary anterior Lobe, okuyinto amaseli (gonadotropins) kufanele GnRH yokwamukela oluthize uketshezi of FSH futhi LH hormone, okuyinto yena, ezithinta ukusebenza kwe-gonads.
PG kuvusa nokuvuthwa of isidoda neqanda amaseli, LH kuthinta uketshezi hormone ocansini (i-estrogen, progesterone, testosterone). Ngaphansi kwethonya ubulili-hormone amaseli kwesimiso sokuzala uvuthwe futhi alungele ukuze sithele.
Ngezinye ukugeleza okusheshayo ngokweqile izinqubo of spermatogenesis futhi oogenesis inhibin labelwe ezinomthelela hormone gonadotropic we anterior pituitary indlala okukhuthaza ukubambezela yonke izinqubo nokuvuthwa of gametes ngokusebenzisa isinyathelo ku follicle inkanuko hormone.
Kungani usebenzisa amalungiselelo gonadotropic
Bayanda ezivamile zokwelapha umkhuba ukwelashwa ngokwethula hormone yokufakelwa. Kwezinye izifo endocrine noma ukuphazamiseka kwempilo kwesimiso sokuzala umuntu wasebenzisa izidakamizwa gonadotropins. nokuphathwa yabo ngezinga elithile nomthelela ekukhiqizweni kwama-hormone ocansini futhi izinqubo ezenzeka emzimbeni.
Uma kwenzeka synthesis gonadotrophins angagcina endocrine izifo ezithile (kwezisu senyanga yokuqala, yokungavuthwa ngokobulili, infantilism ngokobulili, panhypopituitarism futhi Sheehan Syndrome).
Ukuze umelane lezi pathologies, igazi uqhutshwa ucwaningo kanye nokuhlaziywa ngezithako zawo hormone. Khona-ke prescribers ukuthi ayadingeka ukubuyisela izinto esilinganisweni esifanele hormone, futhi ngenxa yalokho, ukulawulwa izinqubo ezibalulekile emzimbeni.
Ziyini izimpawu ukushisa unhlangothi izingane
Acute cystitis - Izimbangela, Izimpawu kanye Ukwelashwa
Amathosta ukuze sandwich ashisayo. Into yokucocobalisa: Intengo Izibuyekezo